Paul Pogba oo lacag u balan qaaday Ciddii u soo hesha dhego dheeman ah oo kaga lumay Tababarka kooxdiisa? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Paul Pogba oo lacag u balan qaaday Ciddii u soo hesha dhego dheeman ah oo kaga lumay Tababarka kooxdiisa?
(28-9-2018) Manchester United Cayaaryahankeeda Paul Pogba ayaa ku jira usbuuc jahwareer ah, waxaa lagu eedeeyay bandhig xumo, waxay tababarka ku dagaaleen Jose Mourinho waxaase uga sii darnaa inay ka lumeen dhegihiisa Dheemanka oo qiimo badan ugu fadhiyay.
In kabadan shan iyo labaatan shaqaale ah ee ka tirsan Man United ayaa isku dayaya inay Dhegaha Dheymanka u helaan laacibka reer France kaddib tababarkii talaadada ee xerada Carrington, balse lama helin mana jirto sidoo kale rajo laga leeyahay in lahelo waayo saacado aad u badan ayaa labaadi Goobayey dhegahaan oo ah kuwo ku fadhiya lacag qaali ah.
Paul Pogba ayaa abaal marin lacag ah u balan qaaday cidii cowska xerada tababarka kooxda ka soo helaa dhegihiisa qiimaha badan ugu fadhiya.
Cayaaryaahnka Manchetser United ee Paul Pogba ayaa kujira maraxalad aad u xun kadib isku dhicii Macalinkiisa Jose Mourinho waxaana laga wareejiyey kabtannimadii uu sida ku meel gaarka ah u hayey waxaa kaloo macquul ah in uu kursiga keydka galo Cayaaraha soo socda.